IBC ရှိ stream ဂီယာအမျိုးအစား IP ကို ​​SDI ကဒ်များသို့ထုတ်လွှင့်ရန် BHV Broadcast | NAB သတင်းများ | 2020 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show LIVE ၏ထုတ်လုပ်သူ။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » သတင်း » BHV အသံလွှင့် IBC မှာ SDI ကဒ်များမှအိုင်ပီ၏ streamGear Range လွှတ်မှ
IBC ရပ် 8.E94
အစွမ်းထက် quad core ကိုအပြောင်းအလဲနဲ့နှင့် superfast ဂရပ်ဖစ်စွမ်းဆောင်ရည်များထောက်ခံမှုထုတ်လွှင့်, ဂရပ်ဖစ်များနှင့် streaming များ applications များ
Owslebury, ဗြိတိန် - BHV အသံလွှင့်, အဆိုပါမျိုးစုံဆုရထုတ်လွှင့်ဒီဇိုင်နာနှင့်ထုတ်လုပ်သူ, IBC မှာ SDI ကတ်များမှopenGear®အိုင်ပီတစ်ခုစီးရီးကိုဖွင့်ဖို့အစီအစဉ်ကိုကြေညာခဲ့သည်။ အဆိုပါ streamGear ကဒ်အကွာအဝေးအစွမ်းထက် quad core ကိုအပြောင်းအလဲနဲ့နှင့် superfast ဂရပ်ဖစ်စွမ်းရည်ပါရှိပါတယ်နှင့်ဤပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ပလက်ဖောင်းတစ်ဟာ့ဒ်ဝဲအင်ဂျင်တစ်ခုသို့မဟုတ်ကို standalone လက်ခံအဖြစ်အမှုဆောင်များကထုတ်လွှင့်, ဂရပ်ဖစ်သို့မဟုတ် streaming များ applications များကိုထောကျပံ့နိုငျသညျ။ လုပ်ငန်းလည်ပတ်ပလက်ဖောင်းတစ်ခုအကွာအဝေးကိုဖြတ်ပြီးဆန္ဒပြပွဲများ 8.E94 ရပ် BHV အသံလွှင့်ရဲ့ IBC တွင်ကျင်းပခဲ့သည်လိမ့်မည်။
Gigabit Ethernet, CANbus, SDI & အပါအဝင်ဆက်သွယ်မှုရွေးချယ်စရာတစ်ခုပြီးပြည့်စုံသောအစု featuring HDMI output ကို (3G, HD, SD က), ကို USB, LTC နှင့် analogue ဗီဒီယို, ဤကဒ်များအိုင်ပီနှင့်သမားရိုးကျဗီဒီယိုနယ်နိမိတ်မှာ applications များအိမ်ရှင်အဖြစ်လက်ခံကျင်းပပေးရန်စွမ်းရည်ရှိသည်။ တစ်ဦးကပုံစံ / စံချိန်စံညွှန်းများ converter ကိုထောက်ခံကြသည် (3 1920p1080 x) 59.94G မှတဆင့် SD က PAL / NTSC ကနေအားလုံးကဗီဒီယိုကို formats သေချာစေရန်ပါဝင်သည်။
အန်းဒရွိုက် Oreo နှင့် Yocto / Debian / Ubuntu ကို / Boot2QT Linux ကိုဖြန့်ဝေရရှိနိုင်သည့်ကတ်များဖြောင့်သေတ္တာထဲက set တစ်ခုအသိဥာဏ်-အင်ဂျင်နီယာအင်္ဂါရပ်များပါဝင်သည်။ open-ဗိသုကာပလက်ဖောင်းဟာ့ဒ်ဝဲ interfaces တိုက်ရိုက်အများဆုံးလုံခြုံရေးနှင့်ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်များအတွက်စိတ်ကြိုက်ခံရဖို့ခွင့်ပြုပါတယ်။ (6 GHz အမြန်နှုန်းမှ 800 MHz ကနေအမြန်နှုန်းနှင့်အတူ Dual-သို့မဟုတ် Quad core ကိုရရှိနိုင်) သည်စက်မှုလုပ်ငန်းစံ iMX1.2 Processor, အသေးစားနှင့်အနိမ့်ပါဝါကိုပုံစံအချက်အတွက်ပြိုင်ဘက်ကင်းအပြောင်းအလဲနဲ့စွမ်းရည်ပေးပါသည်။ တစ်ဦးက Vivante GC2000 2D နှင့် 3D အပြောင်းအလဲနဲ့ယူနစ်ချမ်းသာရှုပ်ထွေးဂရပ်ဖစ်၏ယုံကြည်စိတ်ချရသောပို့ဆောင်မှုအားဖွင့်, OpenGL လိုက်နာဖြစ်ပါတယ်ဂရပ်ဖစ်အရှိန်။
ဘီလ် Garrett, နည်းပညာ၏ BHV ရဲ့ညွှန်ကြားရေးမှူးကရှင်းပြသည်"အတော်များများကထုတ်လွှင့်သောဗီဒီယို applications များနေဆဲကြီးမားတဲ့လိုအပ် Intel ကတစ်ခုတည်းရုပ်သံလိုင်းကယ်နှုတ်တော်မူရန်အကုန်အကျကဗီဒီယိုကဒ်နှင့်အတူ server ကိုအခြေခံသည်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖောက်သည်တွေကိုနားထောင်နှင့်နှင့်ရလဒ်ကဒီဖြေရှင်းချက်ဖြစ်ပါသည် -! ထိန်သိမ်းနေရာပဲ 20U ၌တူညီသောအာဏာ2channel များကိုပေး stacked နိုင်ကတ်တစ်ကတ် "
ဒေတာ-မောင်းနှင်ခြင်းနှင့်ထုတ်လွှင့်ကိုက်ညီသောဗီဒီယို output ကိုအတူ IP ကို ​​streaming များ applications များတည်ဆောက်ရန်ထုတ်လွှင့်သို့မဟုတ်ဗီဒီယိုအတွေ့အကြုံကိုမျှနှင့်အတူ app ကို developer များခွင့်ပြုထားတဲ့အော်ပရေတာ-ဖော်ရွေအန်းဒရွိုက်ဗားရှင်းများနှင့်များအတွက်ပလက်ဖောင်းကိုထောက်ပံ့ပေးမယ့် Linux ကိုမူကွဲ: ကဒ်နှစ်မျိုးနှစ်ဗားရှင်း IBC မှာစတင်နေကြသည် high-performance ကိုဗွီဒီယိုနဲ့ဂရပ်ဖစ် OEM ပစ္စည်း။
ရှိပြီးသား, အောင်မြင်သောလယ်ကွင်း-စမ်းသပ်ပြီးဒီဇိုင်းကိုအပေါ် အခြေခံ. ဤကတ်များ openGear Dashboard ကိုစီမံခန့်ခွဲမှု suite ကိုအဘို့အမြင့်မားသိပ်သည်းဆပေါင်းစည်းမှုနှင့်ထောက်ခံမှုခွင့်ပြုပါ။ ပြည်တွင်းရေး openGear Frame က Ethernet switch ကို option ကိုအသုံးချဖို့, SERDES backplane Ethernet ဖြစ်သကဲ့သို့နှစ်ဦးစလုံးအမွေအနှစ်နှင့်နောက်ဆုံးပေါ် OG3-FR frames များကိုထောက်ခံနေကြသည်။ ဤသည် 20 ကတ်များရုံတစျခု Ethernet switch သည် port ကိုအကျိုးရှိစွာအသုံးချနိုင်ရန်ခွင့်ပြုပါတယ်။
Garrett ဆက်လက် "ကင်မရာနှင့်စမတ်ဖုန်းများကြီးထွားလာတယ်ဆိုတာသိနိုင်ပါတယ်ဒီသမားရိုးကျဗီဒီယိုကို enviroments မှာတစ်ဦး SDI အရင်းအမြစ်ကန့်သတ်ခြင်းနှင့်စျေးကြီးလျက်ရှိသည်ဖြစ်စေခြင်းငှါစွမ်းဆောင်နိုင်မှုကိုဗီဒီယိုအလှူငွေလိုအပ်ချက်များကို streaming အတူ။ အဖြစ်မှန်ထုတ်လွှင့်လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းကို သာ. ကြီးမြတ်သည်ဒေသခံအပြောင်းအလဲနဲ့နှင့် rendering လုပ်နိုင်စွမ်းရှိဘို့လိုအပ်ကြောင်းပိုပိုပြီးအိုင်ပီ-connected နှင့်ဖြစ်လာကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။ သငျသညျ SDI output ကိုအတူအစွမ်းထက်တက်ဘလက် device ကိုအဖြစ်ဒီထုတ်ကုန်စဉ်းစားနိုင်ပါတယ်။ ဒါဟာတစ်ဦး, ထိရောက်ကြော့နှင့်ကုန်ကျစရိတ်-ထိရောက်သောဖြေရှင်းချက်ပါပဲ။ "
စမတ်ဖုန်း, တက်ဘလက်, streaming များကကင်မရာကနေ IP ကိုအလှူငွေ
မိုးလေဝသမြေပုံနှင့်ဗီဒီယို application ကိုမောင်းထုတ်သည်အခြားနေဆဲသို့မဟုတ်ကာတွန်းဒေတာ။
openGear Dashboard ကိုအဘို့အထိန်သိမ်းစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှု့ gateway များတွင်
CANbus တံခါးပေါက်မှ bi-directional အိုင်ပီ
အိုင်ပီဒိုမိန်းတံခါးပေါက်မှ linear timecode
BHV အသံလွှင့်ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာအတိုင်ပင်ခံနှင့်ထုတ်ကုန်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဆိုင်ရာမဟာဗျူဟာကိုအထူးပြုထားတဲ့ဆုရထုတ်လုပ်သူဖြစ်ပါတယ်။ နောက်ထပ်သတင်းအချက်အလက်များအတွက်: www.bhvbroadcast.com
BHV အသံလွှင့်အဆက်အသွယ်: မာတင်ကွတ်
+ 44 (0) 1962 777733 • [အီးမေးလျ protected]
စာနယ်ဇင်းအဆက်အသွယ်: Harriet Diener / သဲကန္တာရမွန်းပြည်သူ့ဆက်ဆံရေး & Advertising ကြော်ငြာ
1-845-512-8283 • Mailto:[အီးမေးလျ protected]
BHV အသံလွှင့် ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ CES2017 အထောက်အပံ့ IBC 2018 ပေါင်းစည်းမှု SDI ကဒ်များမှအိုင်ပီ SoftAtHome, MStar, CES2017 လှံ & Arrows streamGear က Ultra HD ဖိုရမ် ဗီဒီယိုကိုအင်ဂျင်နီယာချုပ် 2018-08-31
ယခင်: element Core ONE နှင့် NAS အားလုံး-NVMe မီဒီယာသိုလှောင်မှုနှင့်ဆာဗာ Solutions IBC 2018 မှာတောင်တန်းထည့်ပေးသည်
နောက်တစ်ခု: DigitalGlue // Deus EX, creative.space ပလက်ဖောင်းအတွက်နောက်ဆုံးသတင်းထုတ်ပြန်ချက်နှင့်အတူမီဒီယာသိုလှောင်ဘို့နယူး Benchmark သတ်မှတ်ရန်